रेष्टुरेण्टमा प्रेमी प्रेमिकाको डेटिङ ; बिल देखेर प्रेमी फरार - Sidha News
प्रेमी प्रेमिकाहरु डेटिङमा जानु सामान्य कुरा हो । आजभोलि प्रेमी प्रेमिकाहरु नियमितजस्तो डेटिङमा जान्छन् र यसका लागि लोकप्रिय स्थानहरुमध्ये रेष्टुरेण्ट पनि एक हो । तर, चीनका एक युवकका लागि भने आफ्नो प्रेमिकालाई डेटिङमा बोलाउनु निकै महंगो साबित भएको छ ।
प्रेमिका आफ्ना २३ जना साथी र आफन्तहरु लिएर रेष्टुरेण्ट पुगिन् । चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चीनको झेजियाङ प्रान्तमा फोन र सामाजिक संजालबाट एक अर्काको नजिक आएका जोडीले ब्लाइण्ड डेट (एक अर्कालाई नदेखी सिधै टेडिङमा जाने) को योजना बनाए । यसको लागि उनीहरुले एउटा रेष्टुरेण्ट रोजे । यो रेष्टुरेण्टमा उनीहरुको पहिलो पटक भेट हुँदै थियो ।
२९ वर्षका युवक निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै निर्धारित स्थानमा पुगे । केही बेरपछि प्रेमिका पनि आइन् तर एक्लै होइन २३ जना साथी र आफन्त साथमा लिएर आइन् । सुरुमा सबै ठिक थियो । उनहिरुले एक अर्कासँग भेटे र साथमा खाना खाए । त्यसपछि जब रेष्टुरेण्टले युवालाई बिल दियो त्यो देखेर उनी डराए ।
त्यसपछि प्रेमी त्यहाँबाट फरार भए । रेष्टुरेण्टले सबै जनाको गरी कूल १९ हजार ८ सय चिनियाँ युआन (३ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ) बराबरको बिल पठाएको थियो जुन बिल देखेपछि युवकको सातोपुत्लो उड्यो । युवकले त्यहाँबाट भाग्नु नै उचित सम्झिए र त्यहाँबाट फरार भए ।
युवतीले आफूले आफ्ना प्रेमीको उदारता जाँच्नको लागि ब्लाइण्ड डेटमा आफ्ना साथी र आफन्तहरु लिएर आएको बताएकी छिन् । युवक फरार भएपछि युवतीले नै रेष्टुरेण्टको सबै बिल तिर्नुपरेको छ । पछि युवतीले पुलिसमा उजुरी गरिन् । पुलिसले पक्राउ गरेपछि युवकले केवल २ टेबलको बिल मात्र तिर्न तयार भए । बाँकी १५ हजार ४०२ युआन युवतीले नै तिर्नुपर्यो । पछि युवतीले आफू सबैभन्दा ठूलो पीडित भएको बताएकी छिन् भने चीनका धेरैजसो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले भने युवकप्रति सहानुभूति देखाउँदै युवतीको क्रियाकलापलाई निर्लज्ज भएको बताएका छन् ।
केपीको लागि केटी मैले नै मिलाइ
संसदमा मुक्का हानाहान, प्रधानमन्त्रीमाथि सुँगुरको मा’सु
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ
भोलिबाट १० दिन लकडाउन हुँदै !
संसदमा मुक्का हानाहान, प्रधानमन्त्रीमाथि सुँगुरको मा’सु प्र’हार
अष्ट्रेलियासँग भारत पराजित
म्याराडोनाको अन्तिम बिदाइमा उर्लियो जनसागर, प्रहरीद्वारा रबरको गोली प्रहार
कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका २६ वर्षीय डा.सुभमको कोरोनाले नै लियो ज्या’न
दुर्घटनापछि सरकारी अस्पताल पुर्याइएकी बालिकाको श’व भुस्याहा कुकुरले तानेर सकडमा!
६ जना गर्भवती युवती लिएर साथीको बिहेका पुगेका युवकले भने–‘यी सबै बच्चाको बाउ म हुँ’
विश्व फुटबलका महान खेलाडी म्याराडोनाको अ’न्त्येष्टि